कृषि विश्वविद्यालयका विद्यार्थी फूलखेती गर्दै ! - कृषि विश्वविद्यालयका विद्यार्थी फूलखेती गर्दै !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २१ कार्तिक, 01:55:30 PM
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा अध्ययनरत विद्यार्थीले प्रयोगात्मक शिक्षासँगै फूलखेती गरेर तिहारमा आम्दानीसमेत गरेका छन् । स्वदेशमै प्रचुर सम्भावना रहेर पनि भारतीय फूलमा निर्भर हुनुपरेको अवस्थामा कृषि शिक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले समूह बनाएर फूलखेती गरेका हुन् ।
विद्यार्थीले चार÷पाँच वटा समूह बनाएर फूलखेती गरेको मिश्रले बताउनुभयो । कृषि स्नातकको अन्तिम वर्ष पढ्दै गरेका हेमन्त पौडेलले फूलको माग पु¥याउन नसकेको बताए ।
चार जनाको समूह मिलेर कल्याणपुर र क्याम्पस परिसरमा फूलखेती गरेको उनले बताए । दुई हजार मालाको माग भए पनि आफूहरुले ७०० माला मात्र पु¥याउन सकेको पौडलको भनाइ थियो ।
फूलमा अझै पनि कोपिला रहेकाले पछि विवाह, सभा सम्मेलनजस्ता कार्यमा बिक्री गर्नका लागि राखिएका छन् । पौडेलले उत्साहित हुँदै भने “प्रयोगात्मक कक्षा पनि भयो, आम्दानी पनि भयो ।”
स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत सुमन पौडेलसहितका आठ जना मिलेर पश्चिम चितवनको चनौलीमा चार कट्ठा १० धुर क्षेत्रफलमा फूल लगाएका छन ।
उनीहहरुले तिहारमा मात्र एक हजार ५०० माला बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । स्नातकोत्तर पढ्ने समूहले रु ६० देखि ८० सम्ममा माला बेच्दै आएका छन् ।
स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत अजय यादवसहितका छ विद्यार्थीले क्यान्सर अस्पताल नजिकै दुई ठाउँमा चारकट्ठामा फूल लगाएका छन् ।
विद्यार्थीको उत्साह देखेर आफू प्रभावित भएको भन्दै सहायक डीन मिश्रले आउँदो वर्ष विश्वविद्यालय परिसरमा व्यवस्थित फूल खेती गर्ने योजना बनाएको बताए ।
कतिपय विद्यार्थीलाई आफूले काठमाडौँबाट फूलका बिरुवा मगाएको र अन्यले स्थानीयस्तरमा बिरुवा किनेको मिश्रले जानकारी दिए । यतिबेला विद्यार्थी फूल टिप्ने, माला उन्ने र बिक्री गर्ने काममा व्यस्त भएका छन् ।
२०७५, २१ कार्तिक, 01:55:30 PM
अनिकाल निम्त्याउने कृषिनीतिको कमाल : चार महिनामै भयो रु. ४ अर्बको भटमासको तेल आयात